वरिष्ठ डाक्टरले छोरीहरुको महिनावारी १०–१२ बर्षमै हुन्छ विवाह योग्य उमेर ११ बर्ष तोकौ भनेपछि...
गृहपृष्ठ » स्वास्थ्य » वरिष्ठ डाक्टरले छोरीहरुको महिनावारी १०–१२ बर्षमै हुन्छ विवाह योग्य उमेर ११ बर्ष तोकौ भनेपछि…
काठमाडौं । अहिले नेपालमा विवाह योग्य उमेर कति ? भनेर प्रश्न उठिरहेको छ ।
केही शारीरिक वृद्धिमा रुपान्तरण भएका कारण विवाह योग्य उमेर घटनाउन प्रतिनिधि सभासम्म नै कुरा उठिसकेको छ ।
सांसदहरुको प्रश्नमा सरकारले विवाह योग्य उमेर घटाउन आँटेको जानकारी समेत दिइसकेको छ । कानून मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा (कोइराला) ले संसदको रोष्टमबाटै विवाह योग्य उमेर घटाउन आँटेको जानकारी दिनुभएको छ ।
अहिले नेपालमा विवाह योग्य उमेर भनेर २० बर्ष तोकिएको छ । २० बर्ष अघि विवाह गरे बालविवाहको कानून अनुसार कसूर ठहर्छ ।
यही बेला स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको प्रवक्ता, स्वास्थ्य सेवा विभागको निर्देशक समेत भइसक्नुभएको प्राध्यापक डाक्टर जागेश्वर गौतमले एक विवादास्पद पोष्ट गर्नुभएको छ ।
यी ३० खानेकुरा खाएपछि यस्ता खानेकुरा भुलेरपनि खानु हुँदैन, कि ज्यानै लिन्छ कि विष बनेर घातक
उहाँको लेखाई व्यांग्य हो जस्तो देखिन्छ । तर यो प्रोफाईलका व्यक्तिले त्यसरी व्यांग्य नगरेको भए हुने भन्ने बहस चलिरहेको छ । उहाँले आजकल छोरीहरुको महिनावारी १०–१२ बर्षमै हुन्छ, महिनावारीपछि बच्चा पनि पाउन सक्दछन ।
त्यसकारण विवाह योग्य उमेर ११ बर्ष तोकौ सरकार । बाल विवाह निर्मुल हुन्छ, नेपालले गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्ड्समा स्थान प्राप्त गर्छ । अपराधका घटना पनि बिरलै भेटिन्छन कि कसो ?
आजकल छोरीहरुको महिनावारी १०-१२ बर्षमै हुन्छ, महिनावारी पछि बच्चा पनि पाउन सक्दछन, त्यसकारण बिबाह योग्य उमेर ११ बर्ष तोकौ सरकार! बाल बिबाह निर्मुल हुन्छ, नेपालले गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्ड्समा स्थान प्राप्त गर्छ। अपराधका घटना पनि बिरलै भेटिन्छन कि कसो?
— Prof Dr Jageshwor Gautam (@gautamjageshwor) June 21, 2022
भनेर लेख्नुभएको छ । एक पंक्तिले यो सरकारलाई व्यांग्य हो भन्ने प्रष्ट देखिन्छ । तर ठ्याक्कै व्यांग्य जस्तो नबुझि सुझाव जस्तो बुझ्नेहरुले भने खुबै आलोचना गरिरहेका छन् ।
स्तन क्यान्सरपछि गर्भवती हुने सम्भावना हुन्छ की हुन्न ? – विशेषज्ञका कुराबाट जान्नुहोस्
गुद्धार चिलाउँछ, कतै यौन रोग त भएन ?
यी ३ खानेकुरा खानुअघि होसियार : स्तन क्यान्सर देखि अनेकौँ जोखिम बढाउछ !
यस्ता छन् मकै खाँदा हुने चमत्कारीक फाइदा तर यस्ता व्यक्तिले भुलेरपनि खानु हुँदैन
जामुन खाएमा स्वास्थ्यलाई अचम्मको फाइदा हुन्छ, विश्वास लाग्दैन भने आफै परीक्षण गर्नुहोस्
‘मङ्कीपक्स विश्वव्यापी स्वास्थ्य प्रकोप’ भन्दै डब्ल्युएचएनद्धारा आपत्काल घोषणा
सावधान ! बूढानीलकण्ठ र सानेपामा पनि फैलियो हैजा
आजदेखि यी २७ जिल्लामा ५ बर्ष देखिका बालबालिकालाई कोरोनाविरुद्धको फाइजर खोप दिइँदै